Liverpool oo Ka Adkaatay Kooxda Sunderland “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Kooxda Sunderland ayaa waxaa garoonkeeda Stadium of Light 0-1 uga badiyay kooxda Liverpool.
Kooxda Liverpool ayaa goolka la hor martay,waxaana daqiiqadii sagaalaad ee ciyaarta u dhaliyay ciyaaryahan Lazar Markovic,sidasi ayaana lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta.
Ciyaaryahan Markovic ayaa goolkiisii ugu horeeyay ee Premier League-ga u dhaliyay u dhaliyay kooxda Liverpool.
Ciyaaryahan Liam Bridcutt ayaa bilowgii qeybtii danbe ee ciyaarta kaarka casaanka ah ka qaatay kooxda Sunderland.
Kooxda Liverpool ayaa kala horeynta horyaalka ingiriiska ee Premier League-ga uga jirto kaalinta sideedaad,waxana ay leedahay 32-dhibcood,halka kooxda Sunderland ay horyaalka uga jirto kaalinta 14-aad,iyadoo leh 20-dhibcood.